प्रधानमन्त्रीलाई तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर संसद्‌मा बहस गर्न आउन गगन थापाको चुनौती- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्रीलाई तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर संसद्‌मा बहस गर्न आउन गगन थापाको चुनौती
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले गरेका कामलाई लिएर संसद्मा बहस गर्न आउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले विगतमा प्रस्तुत गरेका योजनाका पुस्तक देखाउँदै सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आएर बहस गर्नका लागि निम्तो र चुनौती दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले बाहिर 'मिथ्यांक प्रस्तुत गर्दै' मुलुकमा सरकारले राम्रा काम गरेको र समृद्धि भएको भन्ने भाषण गर्ने गरेको भन्दै थापाले तथ्यांकमा टेकेर संसदमा बहस गर्न आउन चुनौती दिएका हुन् ।
'मैले यहाँ उभिएर कुनै कुण्ठा पोखेको होइन । यो नेपाल सरकारले लेखेको पुस्तक हो । यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु । तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु,' थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिँदै भने, 'म तपाईंलाई संसद्मा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु । तपाईं बाहिरका सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर माथिबाट बोल्ने र तलाबाट ताली बजाउने अनि तपाईंका सांसद संसद्मा आएर बाल कविता वाचन गर्ने ?'
थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् छलेर र संसद्‌बाट भागेर नजान भन्दै चुनौती दिए । उनले पहिला आफूसँग आएर बहस गर्न र पछि उद्घाटन गर्न बाँकी रहेका पुल उद्घाटन गर्न र ती सकिएपछि बालुवाटारमा खाली रहेको जग्गामा बन्ने घरको उद्घाटन गरेर बस्न भन्दै व्यंग गरे । थापाले विकास गर्ने प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र त्यसमा आफूहरूले सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । मेलम्चीको खानेपानी योजनामा विगत वर्षौंदेखि काम भइरहेको तर सरकारले भने पछिल्ल ५७ दिनमा मात्रै सबै काम भएका हुन् भनेझैं प्रचार गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले पटकपटक खानेपानी उद्घाटन गरेको, निर्माण सकिएको दुई वर्षपछि पनि पुलको उद्घाटन गरेको तथा काम बीचमा पुगेपछि विभिन्न योजनाको शिलान्यास गर्नु तमासा भएको थापाको भनाइ थियो । उनले शिलान्यास र उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओलीले रेकर्ड राख्न खोजेका हुन् कि भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ १४:३२
बाधा अवरोध छन् भने संसद्लाई जानकारी हुनुपर्छ होइन भने एकतर्फी रूपमा संसद्को काम छैन : लालबाबु पण्डित
काठमाडौँ — नेकपा एमालेका सांसद् लालबाबु पण्डितले सांसद्‌मा बाधा अवरोध छन् भने जानकारी हुनुपर्ने होइन भने एकतर्फी रूपमा संसद्को काम नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद् पण्डितले संसद्‌लाई बाधा अवरोधहरु भएको आफूलाई थाहा नभएको छन् भने संसद्लाई जानकारी हुनुपर्ने बताए । ' बाधा अवरोध छन् भने संसद्लाई जानकारी हुनुपर्छ होइन भने एकतर्फी रूपमा संसद्को काम छैन,' पण्डितले भने,'एकतर्फी रूपमा सरकारले काम दिएन अनि एकतर्फी रूपमा जनताको समस्या संसद् र सरकारले बुझ्न सकिएन भने के हुन्छ ? त्यो पूर्वाग्रह बाहेक केही हुँदैन । '
उनले सातौं अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पास गर्छ कि गर्दैन भनेर जनताले हेरिरहेका बताए । 'नाम विधेयक अधिवेशन । ६५ विधेयक राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । कतिपय सन्धि सम्झौता अनुमोदनका निम्ती पर्खिरहेको स्थिति छ,' उनले भने,'दोस्रो अधिवेशनदेखि नेपालको नागरिकता ऐन विधेयकको रूपमा अहिले पर्खेर बसिरहेको छ । सवा लाखभन्दा बढी युवाहरू कुरिरहेका छन् र आँसु झारिरहेका छन् ।'
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि सदनमा रहेको पनि उनले बताए । विभिन्न समितिले संसद्‌मा प्रतिवेदन पठाइरहे पनि सरकारले संसद्लाई काम गर्न नदिएको भन्दै प्रचार गरिएको उनले बताए ।
'कतिपय गैरसरकारी विधेयक पनि छन् । तर प्रचार गरिँदै छ संसद्लाई सरकारले काम दिएन,' उनले भने, 'सरकारले ल्याएका विधेयक काम होइन ? सन्धि सम्झौता अनुमोदनका लागि ल्याएको काम होइन ? के हो यो ?'
जानकारीको अभाव हो भने विधेयक शाखाबाट रिपोर्ट लिन सकिने उनको भनाइ थियो । 'यो संसदीय प्रणाली नै काम लाग्दैन कि भन्ने ठान्ने र व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास नभएका व्यवस्था नै समाप्त पार्न सकिन्छ कि भन्ने ठान्नेहेरू संसद्को काम मात्रै छैन भन्ने ठान्ने । जबर्जस्ती सरकारलाई हटाउन चाहने कुण्ठा बोकेकाहरूलाई के भन्ने,' उनले भने ।
संसद्ले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन भनेपनि यसमा सभामुखको विशेष भूमिकाको आवश्यकता रहेको उनले बताए । 'यदि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने संसदमाथि प्रश्न उठ्छ भने काम गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्छ भने सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठ्छ सरकारमाथि मात्रै प्रश्न उठ्दैन,' उनले भने ।
उनले संसद्‌मा आएका आसा भरोसाका विधेयक अगाडि बढाउने काममा कसैले नरोकेको बताए । पूर्वाग्रह हटाउनेको अगुवाइ सभामुखले लिनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री र संसद् दोष दिएर उम्किन पाउने स्थिति नभएको उनले बताए । संसद्लाई सक्रिय बनाउन विधेकयक प्रस्ताव सन्धि सम्झौता अगाडि बढाउनका नम्ति जनतासँग सम्बन्धी सरोकारका विषय अगाडि बढाउन सभामुखको विशेष भूमिका हुनुपर्ने पण्डितले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ १४:२८